Ukusebenza amahora amaningi kakhulu ekhaya? Indlela Elula Yokumisa ... | Martech Zone
Ukusebenza amahora amaningi kakhulu ekhaya? Indlela elula yokumisa…
NgoMsombuluko, Julayi 16, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla kusihlwa ngishiye ugesi wami we-laptop emsebenzini. Benginamandla kagesi amabili (enye into enhle okufanele ngiyenze… njalo thenga enye!) Kodwa omunye wabo muva nje uye ku-fritz.
Njengoba ngibhala lokhu okuthunyelwe, ngisalelwe amahora amabili nemizuzu engu-2 ukwenza umsebenzi othile. Impela, nginamanye amakhompyutha endlini - kepha akukho lutho olusebenza kahle njengelaptop yakho elungiselelwe ngendlela oyijwayele. Namuhla kusihlwa ngigijimela:
Buyekeza ikhodi ethile inkampani eyithumele kimi ukuze ithole ukuqondiswa kwami ​​kokuthi ikhodi ye-spaghetti nokuthi ayifanele yini ukuyisindisa.
Qedela ukwahlulela umncintiswano we-PHP owawungu- kufanele izolo.
Buyekeza ezinye izakhiwo zamakhasi ezaqedwa nguStephen ngephrojekthi esisebenza kuyo.
Qhubeka nokuthuthukisa ezinye ze- Ama-plugin we-WordPress.
Qhubeka wenze okunye I-Blog-Tipping.
Futhi lapho unakho… manje ngisalelwe amahora amabili ukulala phansi ngemuva kokubhala lokhu okuthunyelwe! Ngakho-ke icebo lithi: Shiya ukunikezwa kwakho kwamandla emsebenzini! Nakanjani kuzokhawulela amahora akho ukuqedela umsebenzi wakho ekhaya.
Ukubhuloga I-Blog: RobNeville.net
Ukuncipha I-Blog: Ibhulogi Lokumaketha Leqanda